Kheyraadka Qoysaska Soomaaliyeed - Down Syndrome Association of Minnesota
Kheyraadka Qoysaska Soomaaliyeed
Ururka Minnesota Down Syndrome Association waa urur aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeeya gobolka oo dhan oo leh ujeedo ah in la xoojiyo shakhsiyaadka iyo qoysaska, loo abuuro bulsho, loona dabaaldego awoodaha dadka qaba cilladda Down Syndrome. Waxaan tan ku samaynaa annagoo siinayna taageero, gargaar iyo fursado dadka qaba cudurka Down syndrome iyo qoysaskooda. Aragtidayadu waa in dhammaan dadka qaba cilladda Down syndrome-ka ay ku guuleystaan ​​awooddooda buuxda bulsho loo dhan yahay oo la aqbali karo. Waxaa naga go'an inaan siino taageero, gargaar iyo fursado dadka qaba cudurka Down syndrome iyo qoysaskooda. Xubinnimadu waa u furan tahay qof kasta oo xiiseynaya ama xiiseynaya awoodsiinta, isku xirka, iyo dabaaldega dadka qaba cudurka Down syndrome
Boggan, waxaad ka heli doontaa xoogaa macluumaad aasaasi ah iyo ilo cilmi baaris qoto dheer leh. Ururka 'Down Syndrome Association of Minnesota' ayaa kugu xiri kara dadka saxda ah iyo ilaha saxda ah, marka aad u baahatid.
Waalidiinta Cusub iyo kuwa Filan
Waxaa jira ballanqaad iyo suurtagal daqiiqad kasta.
Gaar ahaan kan.
Wax kasta oo aad dareento xilligan waa ok. Farxad Hubaal la'aan. Sugida Walwal Ama, waxay u badan tahay, isku-darka dhammaan waxyaabaha kor ku xusan.
Fahmidda Cilladda Down Syndrome
Raadin deg deg ah oo khadka tooska ah ayaa kaa siin doonta macluumaad fara badan oo ku saabsan cudurka Down syndrome-laakiin waxaan dib u eegi doonnaa aasaasiga halkan. Sida laga soo xigtay Mayo Clinic, Down syndrome waa cillad hidde ah oo keenta marka qayb unugyada aan caadiga ahayn ay keento nuqul dheeri ah oo buuxa (ama qayb ahaan) koromosoom 21. Sababtaas awgeed, koritaanka ilmahaaga iyo astaamaha jidhkiisu way ka duwan yihiin, oo ay ku jiraan naafonimada caqliga iyo dib u dhaca koritaanka. Intee in le’eg iyo nooca ay ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof.
Cilladda Down syndrome-ka ma ahan cudur. Waa cillad, macnaheedu waa waa isku-dar ah astaamo iyo xaalado sida caadiga ah ka jira dadka qaba koromosoomkan dheeriga ah (xaalad loo yaqaan 'trisomy'). Sifooyinka jireed iyo baahiyaha caafimaad way kala duwanaan karaan, laakiin dadka qaba cilladda Down syndrome-ka badiyaa waxay leeyihiin muruq yar, dhererkiisu yar yahay waxayna leeyihiin halista xaaladaha caafimaad qaarkood. Carruurta qaarkood ee qaba cilladda Down syndrome-ka waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo fara badan, halka kuwa kale aysan dhammaan intaas oo dhan u baahnayn.
Ma jiraan wax aad sameysay, ama aadan sameyn, oo sababay in ilmahaagu ku dhasho cilladda Down syndrome-ka. Ma jiraan dabeecad la yaqaan ama arrimo deegaan oo sababa Down syndrome. Cilladda Down syndrome-ka waa xaaladda ugu badan ee koromosoomyada ku dhaca dhammaan jinsiyadaha, jinsiyadaha, iyo fasallada dhaqan-dhaqaale. Gobolka Minnesota, qiyaastii mid ka mid ah 575kii carruur ahba wuxuu ku dhashaa cilladda Down syndrome-ka, oo qiyaastii ah 120 carruur ah sanadkiiba.
Waxaan halkaan ujoognaa ilaha ugu qiimaha badan dhamaan: fursada aan kulaxariirno waalidiinta kale ee kuqanacday halka aad jogto waqtigan. Waxaad u gudbeysaa safarka daahfurka, waalid ahaan, qoyskaaga halbeeg ahaan, iyo cunuggaaga markay korayaan, wax bartaan oo baraaraan. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno tallaabo kasta oo jidka ah, oo aan diyaar u nahay wicitaankaaga ama qoraalka 651-231-8932 emayl ee dsamn@dsamn.org. Weydii su'aal, noo sheeg naftaada, haddii aad horeyba u umushay, na baro ilmahaaga cusub oo aan la wadaagno waxa aan naqaanno-iyo cidda aan naqaanno-si aan wax walba uga yara fududeyno qaadashada.
Sideen ula xiriiri karaa qoysaska kale ee sideyda oo kale ah?
Marka hore, la xiriir ururkayaga. Shaqaalaheena waxaa si gaar ah loogu tababaray inay hal-hal-ciyaar la galaan qoysaska kale ee xaaladaha lamid ah kuwaaga, marka lagu daro waxay si qoto dheer u yaqaanaan barnaamijyada iyo ilaha laga heli karo dhamaan Minnesota
Maxay yihiin agabyada aad ku talinayso markaan korinayo ilmahayga?
Waxaan haynaa dhowr ilo iyo barnaamijyo diyaar ah oo aan ku taageerno adiga iyo qoyskaaga.
Iskuxirayaasha Waalidka DSAMN waxay bixiyaan taageero, caawimaad iyo gudbin. Isku xirayaashayada Waalidiinta ee sida gaarka ah u tababaran ayaa ah joogsigaaga ugu horeeya ee su'aal kasta. Diyaar u ah si wanaagsan oo cilmi-baaris ah, dhaqamo ka jawaaba dhaqan ahaan, Xiriiriyahaaga Qoyska ayaa ku bari kara waalid kale ama daryeel bixiye, ku siin kara macluumaad iyo taageero, isla markaana tilmaami kara barnaamijyada iyo ururada bulshada iyo ilaha ugu waxtarka badan ee baahidaada degdegga ah.
Khadkeena Hadalka-iyo-Qoraalka Waalidiintu waa macluumaad qiimo u leh labada waalid ee mustaqbalka iyo mustaqbalka. Si fudud nala soo xiriir 651-231-8932 su'aal ama baahi, xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa ka jawaabi doona ASAP.
Quraacda Qoyska Cusub waxaa loogu talagalay waalidiinta, ayeeyooyinka, ayeeyada, qaraabada iyo asxaabta dhallaanka kaliya ee dhashay ee qaba cilladda Down syndrome-ka. Iimayl dsamn@dsamn.org si aad u aragto marka quraacda xigta la qorsheeyay iyo RSVP.
Kooxaha Taageerada Waalidiintu waxay ku dhow yihiin bulsho kasta oo ku baahsan Minnesota. Intaa waxaa dheer, waxaan u wadnaa kooxo taakulo gaar ah awooweyaasha, walaalaha, iyo qoysaska Latinx iyo kuwa Soomaalida.
Fursadaha asxaabta ee ilmahaaga markay korayaan si ay u sahamiyaan siyaabaha looga caawiyo inay la jaanqaadaan oo wax u bartaan carruurta kale ee qaba cilladda Down syndrome-ka. Boggeena jadwalka waxay bixiyaan adeegyo da 'ahaan loo abaabulay, laga bilaabo xeryaha illaa taageerada waxbarashada, barnaamijyada socda ilaa fursadaha kala-guurka ee dadka waaweyn
Kheyraadka Gudaha iyo Qaranka ee Dheeraadka ah
Xarunta Pacer ee carruurta naafada ah
Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health